Izinhlelo Zokusebenza Zamahhala Zokwenza Ama-slideshow (i-Desktop Software, Izinhlelo Zokusebenza Zamaselula, namapulatifomu aku-inthanethi) Martech Zone
Izinhlelo zokusebenza ezihamba phambili zamahhala zombukiso wesilayidi (i-Desktop Software, ama-Mobile Apps, namaPlatform
NgoLwesine, ngoMashi 11, 2021 NgoLwesine, ngoMashi 11, 2021 Sammy Zhou
Isoftware yomenzi wesilayidi omuhle ikuvumela ukuba uthuthukise izethulo noma amavidiyo ahlaba umxhwele ngamathuluzi ahlukahlukene enziwe ngezifiso njengamathempulethi, imisindo, imiphumela, ukufomatha umbhalo kanye namajamo, njll. Amafayela akhiqizwe agcinwa ngezindlela ezahlukahlukene ezifana. I-MPEG, MOV, .AVI noma .MP4, njll. Ngakho-ke zingatholakala kalula kwamanye amapulatifomu afana ne-Android, iOS noma ikhompyutha. Lezi zethulo zingakusiza wenze imicimbi ekhethekile enjengezinsuku zokuzalwa noma imishado ingalibaleki, njengoba inikela ngendlela engcono kakhulu yokuveza ubuhlakani bakho. Ungathola kalula izinhlelo zokusebenza eziningi kwi-inthanethi ngokwakha ama-slideshows futhi kulesi sihloko, ngizobhala uhlu lwazo eziyi-12!
Ingxenye 1: Amapulatifomu wedeskithophu aphezulu ama-4 wamahhala
Amathuluzi wokwenza ama-slideshow amahle kakhulu abhalwe ngezansi yi-software ehambisanayo ye-Windows ne-Mac. Izinqubo zokwenza umbukiso wesilayidi ngezithombe ziyefana: engeza izithombe kuqala bese ufaka umsindo / umculo, ugcine kwi-DVD noma kwikhompyutha noma wabelane ngazo ezinkundleni zokuxhumana.
1. I-Wondershare Filmora
I-Wondershare Filmora akuyona nje umhleli wevidiyo kepha ikuvumela ukuthi wakhe ama-slideshows, kokubili kwabaqalayo nabaqeqeshiwe. Konke lokhu kwenza kube lula kakhulu ukuthuthukiswa kwevidiyo nemisebenzi yesilayidi ku-Windows naku-Mac. Njengethuluzi elakha ama-slideshows ngomculo nangoshintsho, izihlungi, imbondela, njll.
Ixhasa wonke amafomethi wefayela athandwayo futhi umbukiso wesilayidi ungabiwa ngqo kuma-social media platforms afana ne-YouTube, Vimeo, njll.
Izici eziningi zenza ukuthuthukiswa kwesethulo kuphumelele kakhulu.
I-interface enembile enamathuluzi asebenziseka kalula.
IFiloraora inelabhulali yomsindo eyakhelwe ngaphakathi enikeza izitayela zomculo ezihlukile nemisindo
Iphethe izingcezu eziningi zomculo, izihlungi, izinto ezinyakazayo, ukuguquka nokumbondelana.
Wonke amafomethi wefayela athandwayo asekelwa.
Ukulayisha okulula ezinkundleni zokuxhumana.
2. I-Wondershare DVD Slideshow Builder
I-Wondershare DVD Slideshow Builder Ithuluzi linikeza isixazululo esinamandla sokuthuthukisa ama-slideshows anezici ezinesidingo sobuchwepheshe. Abasebenzisi bangahlanganisa kalula amavidiyo nezithombe kanye nemiphumela yokuguquka kwe-2D noma ye-3D. Ividiyo yemiphumela ingabiwa ngaso leso sikhathi ku-YouTube, iPod noma i-TV.
Kulula kakhulu ukusebenzisa leli thuluzi ngezici ezisethwe ngaphambilini.
Inikeza iqoqo elikhulu lamafomethi wesithombe, ividiyo nevidiyo.
Ukuhlela kungenziwa kwabezindaba ngaphambi kokufaka isicelo sokugcina.
Akuvumeli abasebenzisi ukuthi babelane ngezethulo nge-imeyili noma ngqo kumaCD asebenzayo.
I-3 I-Freemake Video Converter
I-Freemake Video Converter iyi-software ekahle yokwenza ama-slideshows asheshayo. Ihlela ukuqoqwa kwamavidiyo nezithombe okuhle kakhulu ngendlela emangalisa kakhulu yeWindows PC. Uma udinga ukuhlanganisa inani elikhulu lezithombe kumbukiso wakho wesilayidi, i-Freemake iyona engcono kakhulu ongayikhetha.
Ikhululekile ngokuphelele futhi akukho ukubhaliswa okudingekayo.
Izinhlobo eziningi zamafayela okukhipha ziyasekelwa.
Ikuvumela ukuthi ulayishe iphrojekthi yakho ku-YouTube ngqo.
Izintshumayelo zingadluliselwa ngqo ku-DVD.
Azikho izifanekiso noma izifanekiso ongaqala ngazo.
Ungasebenzisa umthelela owodwa kuphela futhi awukwazi ukwengeza umbhalo kuma-slideshows.
I-4. I-Windows Movie Maker
Umenzi we-Windows Movie Microsoft ikuvumela ukuthi ungeze iqoqo lakho lomculo, amavidiyo nezithombe ku-slideshows. Amavidiyo nawo angarekhodwa ngqo kusuka kwikhamera yewebhu bese ahlanganiswa nomsebenzi. Kulula kakhulu ukusebenzisa imiphumela ebonakalayo kanye nemifanekiso.
Ipulatifomu engasindi futhi elula ukuyisebenzisa.
Inani elikhulu lezinguquko ezinemiphumela yokubuka.
Inikeza isici sokwabelana ngqo nabezindaba zenhlalo.
Ukusebenza okulinganiselwe kuqhathaniswa namanye amathuluzi atholakalayo emakethe.
Ixhasa amafomethi wefayela elinganiselwe.
Ingxenye 2: Best Free Slideshows Online Software
Okwalabo abafuna ukwakha isethulo ngaphandle kokulanda noma iyiphi isoftware noma ukufaka izinhlelo zokusebenza, sithole okungenani amapulatifomu ama-3 MAHHALA aku-inthanethi akuvumela ukuthi wenze njalo.
4. Khombisa kancane
Khombisa kancane uhlelo lokusebenza oludidiyelwe lwezokuxhumana oluvumela ukuhlanganyela okulula kokuqukethwe kumanethiwekhi omphakathi. Abasebenzisi bangangenisa amavidiyo noma izithombe kusuka kumakhompyutha abo asekhaya noma bangafinyelela kwimidiya ngqo kusuka kuzinkundla zokuxhumana njengoba kudingeka.
Ingenza izinto eziningi ngaphandle kokuthuthukisa nje izethulo ezilula.
Inezici eziningi zokwabelana ezisuselwa emphakathini.
Abasebenzisi bangangenisa amafayela emidiya avela kuzingxenyekazi ezahlukahlukene zokuxhumana.
Amavidiyo angasethwa njengangasese noma asesidlangalaleni.
Inikeza izinketho eziningi ezenziwe ngokwezifiso zokuguquka kwesithombe nokusheshisa.
Akulula kakhulu ukuyisebenzisa.
Amavidiyo athuthukisiwe awakwazi ukulandwa.
I-FlexClip ikhululekile ayi-100% kepha isanikeza izici eziningi kubo bonke abasebenzisi. Akukho ukulanda okudingekayo, njengoba kusebenza ku-inthanethi ngakho konke okwakhelwe ngaphakathi amathuluzi wokuthuthukisa umbukiso wesilayidi. Abasebenzisi bangangeza amavidiyo noma umculo endaweni yesikhulumi futhi amafayela angabiwa kamuva nezinkundla zokuxhumana.
I-Kizoa ngesinye isihleli sevidiyo esaziwa online esivumela ukufinyelela okulula kwezici ezimangalisayo ngaphandle kokubhaliswa. Umhleli othuthukile usekela ukugqwayiza, ushintsho, nemiphumela futhi unikeza izinketho eziningi zomculo zokuthuthukisa amavidiyo asebenzisanayo. Abasebenzisi bangenza kalula imininingwane yesikhathi, ubude besikhathi, usayizi noma indawo, njll, njengoba kudingeka.
Ingxenye 3: Kuhle khulula slideshow zokusebenza ze-Android
Abantu abafuna ukudala umbukiso wesilayidi nge-smartphone ye-Android, bangalanda lezi zinhlelo zokusebenza zamahhala zombukiso wesilayidi.
1. Indaba Yesithombe
Indaba Yesithombe ingahlakulela izethulo ezinhle nama-movie kalula ngezinyathelo ezintathu. Abasebenzisi badinga nje ukukhetha izithombe kusuka kumadivayisi wabo, ukudala umbukiso wesilayidi ngokushintshwa okufiswayo nezindikimba, futhi ekugcineni bonge noma babelane ngokuthanda kwabo.
Kunezihlungi eziningi, ukugqwayiza nemibhalo engezansi.
Inikeza imiphumela yokucaca okuphezulu.
Ijubane lokudlala lingalungiswa ngokuya ngezidingo zabasebenzisi.
Inani elilinganiselwe lezithombe kuphela elingakhethwa.
2. I-PIXGRAM - isithombe sombukiso wesilayidi
Iphikiseli iyithuluzi elinethezekile, elilula futhi elimnandi elingaqoqa kalula zonke izithombe ndawonye ukwakha umbukiso wesilayidi onemiphumela engemuva ehehayo. Kunezici eziningi kakhulu ezenziwe ngokwezifiso zokulungiswa komphumela ekunambithekeni kwakho.
Ukwabelana okulula ezinkundleni zokuxhumana.
Ilula ukuyisebenzisa enezici eziningi.
Inikeza izici zokuhlela eziyisisekelo nemiphumela.
I-FilmoraGO uhlelo lokusebenza lweselula olunikeza ulwazi lomsebenzisi olwenziwe ngokwezifiso kakhulu nge-interface elula ukuyisebenzisa. Kulula kakhulu ukusika amavidiyo futhi ungafaka futhi izihlungi ezahlukahlukene kokuqukethwe ngezindikimba eziningi ezenziwe ngomumo. IFiloraoraGo ithole ukunakwa okukhethekile kumphakathi wabasebenzisi ngenxa yamathuluzi wayo wokusetha nokuthuthukisa.
Inikeza iqoqo elikhulu lamatimu.
Inemiphumela eminingi epholile efana ne-reverse, ukuhamba kancane nokunyakaza okusheshayo, njll.
Kwesinye isikhathi kuhamba kancane ngamafayela amakhulu.
Ingxenye 4: Best Free Slideshow Maker Apps for iOS
Ngaphandle kokusebenzisa i-Apple iMovie ukudala ama-slideshows ku-iPhone yakho, ungazama futhi izinhlelo zokusebenza zamahhala ezilandelayo ukudala ama-slideshows kumadivayisi we-iOS.
Labo abadinga uhlelo lokusebenza lokwenza izethulo ezinezici ezicebile nezinembile ku-iPhone yabo bazothola i- Isilayidi Lab Isicelo sithakazelisa impela. Kulula kakhulu ukucubungula izithombe, umculo namavidiyo usebenzisa leli thuluzi. Futhi, imibukiso yamaslayidi yanoma yibuphi ubude ingakhiwa kalula.
I-SlideLab iyithuluzi eliphambili, elinamandla nelithakazelisayo lokuthuthukisa ama-slideshows angasetshenziselwa izidingo zobungcweti nezomuntu siqu.
Uhlelo lokusebenza oluhle futhi olulula ukusebenzisa.
Kulula kakhulu ukwengeza imiphumela ethokozisayo.
Kunzima kancane ukuhlela izithombe njengoba kudingeka.
Lolu hlelo lokusebenza ivumela abasebenzisi ukuhlanganisa izithombe zibe ozimele, ne ngokwezifiso isici isilinganiso, usayizi nombala, njll It uya igxathu phambili izihlungi ezithuthukile ukudala slideshows kakhulu interactive ukuthi kungenziwa athuthukiswe kalula.
I-PicPlayPost ivumela abasebenzisi ukuthi bakhethe ama-gifs, amavidiyo nezithombe, njll. Ekwakheni izethulo ezidonsa amehlo.
Inikeza umsebenzi olula wokuhlanganisa ividiyo ngezethulo.
Ukudlala ngokulandelana nangesikhathi esisodwa kungadalwa kanye nezici eziningi ezihlukile.
Ivumela abasebenzisi ukuthi bacabange ngaphandle kwebhokisi ngamalungiselelo amasethi wamavidiyo amaningi.
Akunikeli ukusekelwa okususelwa ku-iCloud kokudlulisa noma ukugcina okuqukethwe phakathi kwamadivayisi ahlukile.
Enye yezinto ezinhle kakhulu esingayenza kukhompyutha ukudala isethulo sezithombe, lapho izithombe ziskrola zilandelana ngokuqhubekayo nangokuzenzekelayo. Sikukhombisile amawebhusayithi amahle kakhulu ukudala ama-slideshows nezithombe ozozibona kwi-Intanethi, ngaphandle kwesidingo sokusebenzisa izinhlelo. Sekuyisikhathi sokuba ukhethe okuthandayo bese uqalisa!
Tags: isoftware yedeskithophu yesilayidiumabhebhanai-flexclipizinhlelo zokusebenza zamahhalaumenzi wesilayidi wamahhalasoftware freei-freemake video converterkizo-Microsoftuhlelo lokusebenza lwesilayidi seselulaamapulatifomu wesilayidi esiku-inthanethiisithombe sombukiso wesilayidiindaba yesithombeIzithombeumabhebhanaiphikiselislobabekancanebonisa kancaneslideshowizinhlelo zokusebenza zombukiso wesilayidiamapulatifomu wesilayidiukuhlela ividiyoUmakhi wesilayidi se-Wondershare dvdisimangaliso filmora
USammy ungumakethi wedijithali futhi ungumthandi wezithombe nezithombe zevidiyo. Uhlala ezama ukuthola okuthile okusha kokuqukethwe kwakhe futhi uthanda ukwaba amathiphu namasu wokumaketha. Isebenzela i- I-FlexClip, uyazifela ngayo yonke into ephathelene nokukhiqizwa kwamavidiyo.
UJun 13, 2021 ngo-9: 03 AM
USammy ngiyabonga ngendatshana yakho, ungumlobi omuhle ngiyayithanda i-athikili yakho, futhi ngisebenzisa uhlelo lokusebenza lweSlideLab lokhu kumnandi, ngisebenzisa uhlelo lokusebenza lweVimory ukudala amavidiyo wesilayidi (https://apps.apple.com/us/app/vimory-photo-video-maker/id1359573092). Lolu hlelo lokusebenza kulula ukuyisebenzisa, i-UI / UX enhle futhi inezici eziningi.